ESI TINYE OKWU - OKWU - 2019
Okwu Microsoft bụ onye nchịkọta ederede kachasị ewu ewu n'ụwa. Ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa maara banyere ya, onye nwe ọ bụla nke usoro a ahụwokwa usoro nke itinye ya na kọmputa ya. Ọrụ dị otú a siri ike maka ụfọdụ ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ, ebe ọ bụ na ọ chọrọ ụfọdụ ọnụọgụ. Ọzọ, anyị ga-aga site na ntughari tụlee ntinye nke Okwu ahụ ma nye ntụziaka ndị dị mkpa.
Hụkwa: Ịwụnye mmelite Microsoft Microsoft ọhụrụ
Anyị na-etinye Microsoft Okwu na kọmputa
Mbụ, M ga-achọ ịma na nchịkọta ederede sitere n'aka Microsoft abụghị n'efu. A na-enye mbipụta ikpe ya maka otu ọnwa na ihe achọrọ tupu ejigide kaadị bank. Ọ bụrụ na ịgaghị akwụ ụgwọ maka usoro ihe omume ahụ, anyị na-enye gị ndụmọdụ ịhọrọ software yiri ya na ikikere n'efu. E nwere ike ịchọta ndepụta nke ngwanrọ dị otú ahụ na ọkwa anyị ọzọ na njikọ dị n'okpuru ebe a, anyị ga-aga n'ihu na ntinye nke Okwu.
Gụkwuo: nsụgharị ise nke free nke editọ ederede Microsoft Word
Nzọụkwụ 1: Download Office 365
Onye na-abanye na Office 365 na-enye gị ohere iji ihe ọ bụla na-abata maka obere ego kwa afọ ma ọ bụ kwa ọnwa. Ụbọchị iri atọ mbụ ahụ bụ ihe ọmụma na ọ dịghị mkpa ịzụta ihe ọ bụla. Ya mere, ka anyị tụlee usoro maka ịzụta ndebanye aha n'efu na nbudata ihe dị na PC gị:
Gaa na peeji nke Microsoft Word download
Mepee ihu na ibe na Ward na njikọ dị n'elu ma ọ bụ site na nyocha ọ bụla n'ime ihe nchọgharị ọ bụla.
N'ebe a, ị nwere ike ịga ozugbo ịzụta ma ọ bụ gbalịa nsụgharị ahụ n'efu.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ nke abụọ, ị kwesịrị ị pịa ọzọ "Gbalịa n'efu maka otu ọnwa" na akwukwo meghere.
Banyere akaụntụ Microsoft gị. Ọ bụrụ na enweghị ya, gụọ nzọụkwụ ise n'ime akwụkwọ ntuziaka ahụ, nke e gosipụtara na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Ịdenye akaụntụ Microsoft
Mgbe ị abanye na akaụntụ gị, họrọ mba gị ma tinye usoro ịkwụ ụgwọ.
Nhọrọ dị ugbu a bụ iji debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Dejupụta ụdị dị mkpa iji jikọọ data na akaụntụ ahụ ma nọgide na-azụ.
Mgbe ị nyochachara ozi ahụ a banyere, a ga-akpali gị ibudata Office 365 installer na kọmputa gị.
Chere maka ya ka ị kwado na-agba ọsọ.
Mgbe ị na-elele kaadị ahụ na ya, a ga-egbochi ego ole otu dollar ga-egbochi, n'oge na-adịghị anya, a ga-ebufe ya ego ọzọ. Na ntọala akaụntụ Microsoft, ị nwere ike wepu aha na ihe ọ bụla enyere gị n'oge ọ bụla.
Nzọụkwụ 2: Wụnye Office 365
Ugbu a, ị ga-etinyerịrị ngwa ngwa ebudatara software na PC gị. A na-eme ihe niile na-akpaghị aka, onye ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ ole na ole:
Mgbe mmalite nke installer, chere ruo mgbe ọ kwadebere faịlụ ndị dị mkpa.
Usoro nhazi amalite. Naanị Okwu ga-ebudata, ma ọ bụrụ na ịhọrọ nrụpụta zuru ezu, a ghaghị ibudata ngwanrọ niile dị n'ebe ahụ. N'oge a, agbanyụla kọmputa ma ghara ịkwụsị njikọ ahụ na Ịntanetị.
Mgbe a kwụsịrị, a ga-amara gị ọkwa na ihe niile na-aga nke ọma, a ga-emechikwa window ahụ.
Nzọụkwụ 3: Malite Okwu Mbụ
Ihe omume ị họọrọ bụ ugbu a na PC gị ma dị njikere ịga. Ị nwere ike ịchọta ha site na menu "Malite" ma ọ bụ akara ngosi na-egosi na ọrụ. Lezienụ anya na ntụziaka ndị a:
Mepee Okwu. Mgbape mbụ nwere ike iwe ogologo oge, dịka a na-ahazi ngwanrọ na faịlụ.
Nabata nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị ọrụ nke nchịkọta akụkọ ga-adị.
Gaa rụọ ọrụ ngwanro ahụ ma soro ntuziaka dị na ihuenyo ahụ, ma ọ bụ mechie windo ma ọ bụrụ na ịchọghị ime ya ugbu a.
Mepụta akwụkwọ ọhụrụ ma ọ bụ jiri ndebiri enyere.
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa na njedebe. Akwụkwọ ntuziaka a ga-enyere ndị ọrụ nyocha aka iji dozie nhazi nke editọ ederede na kọmputa gị. Na mgbakwunye, anyị na-akwado ịgụ akwụkwọ ndị ọzọ anyị ga-enyere aka mee ka ọrụ ahụ dị mfe na Microsoft Word.
Ịmepụta akwụkwọ edemede na Microsoft Word
Idozi njehie mgbe ị na-agbalị imeghe faịlụ Microsoft Word
Nzere Nsogbu: Enweghị ike idezi Okwu Okwu MS
Gbanwee ederede akpaka na MS Okwu